ပဲပင်ပေါက်သုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြက်သွန်နီ.............၁ လုံး (ပါးပါးလှီး)
ကြက်သွန်ဖြူ .............၃ တက်( ညှက်နေအောင်စဉ်းပါ)
ဆား+ ဟင်းခတ်မှုန်. ....သင့်ရုံ
ကြက်သွန်မြိတ်.............၃ ပင် (ပါးပါးလှီး)
ပြီးခဏမှာပဲ..ဇကာတစ်ခုထဲသို.လောင်းချ ၊ရေအေးလောင်း ၊ အအေးခံ ၊
ရေစင်အောင်ဆိုပြီးလက်နဲ.ဖိမညှစ်လိုက်ပါနဲ. ( ပဲပင်ပေါက်အဟာရဓါတ်အကုန်ဆုံးရှုံးပြီး အဖတ်တွေပဲစားရပါလိမ့်မယ်)